Wasiirka Boostada XFS: Haddii Sharciga Isgaarsiinta Uu Meel Maro Waxaa Bilaaban Doona Isla-xisaabtan
“Xeerka Isgaarsiinta Qaranka ee hor yaalla Golaha Shacabka waxaa loogu talo galay inuu difaaco xuquuqda shirkadaha iyo dadweynaha intaba waxa uuna muhiim u yahay horumarinta Isgaarsiinta dalka, haddii sharcigaas uu meel marana waxaa billaaban doona isla-xisaabtan iyo horumarin’”,ayuu yiri Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyada Soomaaliya, Eng Cabdi Canshuur Xasan.
Wasiir Canshuur ayaa hadalkaasi ka jeediyay shir wada-tashi oo looga hadlayay: go’itaankii internet-ka ee Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya, tallaabooyinka xiga ee ay tahay in laqaado iyo sida looga gaashaamankaro soo noqoshada dhacdadaas.
Shirkadaha isgaarsiinta, kuwa internet-ka, ururka midowga jaamacadaha dalka iyo madax ka socotay Jaamacadda Ummadda ayaa kasoo qeyb galay shirk, waxaana qola walba ay ka hadashay saameynta ay ku yeelatay.
Wasiir Canshuur ayaa dhowr mar carabka ku dhuftay sida uu muhiim u yahay in la helo sharciyo ilaaliya xuquuqda shirkadaha isgaarsiinta iyo dadweynahaba, waxuuna sheegay in sharcigaasi uu keenayo islaxisaabtan laba dhinac ah.
Shirkadda Dalkom oo ah shirkadda keentay addeegga internet-ka ee Fiber Optic-ga ee go’naashahiisa ay si weyn u saameysay Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa ka warbixisay sida ay cillada ku timid iyo waxyaalaha ay ka barteen ka shirkad ahaan.
Maxamed Axmed Jaamac oo ah maamulaha shirkadda Dalkom Somalia ayaa ugu dambeyntii xusay in ay ka diyaargaroobayaan si aysan usoo noqon ciladda iyo in hay’adaha kala duwan ee dowladda la kaashan doonaan sidii looga taxadari lahaa in internet-ka uu go’o mar labaad.